म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितले पाए साढे चार करोड राहत रकम
म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितलाई रू‍. साढे चार करोडभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएकाको आफन्त र विस्थापित भएकालाई राहत तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ताबापत चार करोड रू‍. ६५ लाख २१ हजार वितरण गरिएको हो।
यसअघि विभिन्न चरणमा रू‍.पाँच लाख राहत रकम बुझेका द्वन्द्वपीडितलाई यसपालि एकमुष्ट रू‍. पाँच लाख थप गरेर रू‍.१० लाख पुर्‍याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि डेढदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ थप रकम दिएर रू‍. १० दश लाखको राहत प्याकेज पूरा गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको एक दशकपछि द्वन्द्वपीडितले विभिन्न चरणमा पूरा राहत रकम पाएका हुन् । ८९ लाई रू‍. पाँच —पाँच लाख, चारलाई रू‍. एक लाख ५० हजार र एकजनाको आफन्तलाई रू‍.दुई लाख ५० हजार वितरण गरिएको छ ।
स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनको सिफारिसअनुसार द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २९ जनाको नाममा रू‍. २५ हजारका दरले बजेट आए पनि २१ जनाले मात्र रकम बुझेका छन् । चारजना विस्थापितले यसअघि नै राहत पाइसकेका थिए । बेपत्ताको सूचीमा रहेका बरञ्जाका भीमप्रसाद भट्टचनका आफन्त कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि वितरण हुन सकेन ।
यसैगरी, द्वन्द्वकालमा अङ्गभङ्ग भएका एक जनाले मासिक रू‍. १२ हजार ४०० र चार जनाले रू‍. छ हजार २०० का दरले जीवन निर्वाह भत्ता पाएका छन् । द्वन्द्वकालमा अभिभावक गुमाएका १८ वर्षमुनिका तीन जनाले मासिक रू‍.पाँच हजारका दरले पूरै वर्ष र पछि सिफारिस भएका एक जनाले चार महीनाको सहयोग पाएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको प्रशासनका लेखापाल विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७४, १२:०६:५६